ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Jiangyin Chenhao Technology Co., Ltd.
2018 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ JIANGYIN CHENHAO ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ CO., LTD. ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းအနီး၊ Jiangyin မြို့၊ Jiangsu ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ အဲဒါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လည်ပတ်နေသော နည်းပညာမြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် ဖြတ်တောက်ထားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိပညာများမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူအား အဆက်မပြတ် မြင့်မားသောတန်ဖိုးကို ပေးအပ်ပြီး နှစ်များတစ်လျှောက် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်အတွက် sublimation စက္ကူကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီး စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ပါသည်။ မာစတာ၊ ပါမောက္ခများနှင့် အကြီးတန်း coated အင်ဂျင်နီယာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အစွမ်းထက်သောအဖွဲ့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်ဈေးကွက်တွင် ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး sublimation စက္ကူ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသုံးချနည်းပညာဆိုင်ရာ ဉာဏမူပိုင်ခွင့်အချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး နိုင်ငံအလိုက် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ရလဒ်များစွာကို ရရှိခဲ့သည်။ .
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များအား အကောင်းဆုံး ပေးဆောင်ပါ။ အရည်အသွေး sublimation စက္ကူ။
ကြှနျုပျတို့မှာ ထိပ်တန်း coating စက်ရုံ အတူ ဆယ်နှစ် တရုတ်နိုင်ငံတွင် sublimation စက္ကူထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် စတုရန်းမီတာ 30,000 ကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး၊ နှစ်စဉ် အထွက်နှုန်းသည် တန်ချိန် ၂၀,၀၀၀ ရှိသည်။ ငါတို့မှာရှိတယ်5မြန်နှုန်းမြင့်အပေါ်ယံပိုင်းလိုင်းများ နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်ရန်၊ အများဆုံးအကျယ် 320 စင်တီမီတာအထိ။ ငါတို့အလုပ်ရုံတွေရှိတယ်။ 20 အလိုအလျောက်ပြန်ရစ်ခြင်း နှင့် အခွဲစက်များ အစုံပါရှိပါသည်။၊ 2''core နှင့် 3''core နှစ်မျိုးလုံးရရှိနိုင်ပါသည်၊ လိပ်အရှည် 10,000 မီတာအထိ။ အခြေခံစက္ကူမှ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အထိ အရည်အသွေးသေချာစေရန်အတွက် အစုံအလင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများလည်းရှိသည်။
လက်ရှိတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောအလေးချိန်ဖြင့် sublimation စက္ကူကို အဓိကထုတ်လုပ်ပါသည်။ 35gsm-140gsmမတူသော အကျယ် 21cm-320cm နှင့် မတူညီသော အလျား 100-10,000m စံနှင့်ဂျမ်ဘိုလိပ်များ၊ စူပါစာရွက်အရွယ်အစား A4/A3 ပါဝင်သည် ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး R&D ဌာန မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အမြဲသန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ မျိုးဆက်သစ် sublimation စက္ကူ ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန် မတူညီသော ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေများနှင့် အသုံးချပရိုဂရမ်များ။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များကို အရည်အသွေးမြင့် အမျိုးမျိုးဖြင့် ပေးစွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်။အသစ် ထုတ်ကုန်များ၊ စက်ရုံ OEM & ODM ဝန်ဆောင်မှု, အဆင့်အတန်းမြင့်သော နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောထုပ်များ နှင့် one-stop ထောက်ခံမှု။ လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်အချို့ FYI အကြံပြုထားသည်။
120gsm စူပါစာရွက် sublimation စက္ကူ
Sdesktop ပရင်တာအတွက် အထူးသီးသန့်၊ စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်sခွက်များ၊ ဂျစ်ဆာ စသည်ဖြင့်၊
စင် ရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လိုဂိုကို အနောက်ဘက်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် ပုံနှိပ်ဘက်ခြမ်းကို ခွဲခြားရလွယ်ကူသည်။
8.5''X11''၊ 8.5''X14''၊ 11''X17''၊ 13''X19''၊ A4၊ A3၊ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားကို လက်ခံနိုင်သည်။
ပက်ကေ့ဂျ်တွင် မိတ်ဆက်ထားသော အရောင်စာမျက်နှာကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။
70-100gsm အမြန်ခြောက်သွေ့သော sublimation စက္ကူ
EEPSON F စီးရီးပရင်တာအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်။
ဖက်ရှင်အဝတ်အစားများ၊ အားကစားဝတ်စုံအများစုအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သော sublimation စက္ကူ။
၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ ခြောက်သွေ့သည်၊ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်စေသည်၊ တောက်ပသောအရောင်၊ မြင့်မားသော လွှဲပြောင်းနှုန်း > 95%။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းတွင် ထူးထူးခြားခြား ပြားပြားချပ်ချပ် စွမ်းဆောင်ရည်.
နောက်ထပ်တောင်းဆိုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ၊ Tel: 0086 18861612732, Email: info@jyaonaisi.com.